जेष्ठ नागरिक : असीम ज्ञान, सीप र अनुभवका धरोहर | ImageKhabar <!-instant articles-->
शुक्रबार, १ कार्तिक, २०७६
जेष्ठ नागरिक : असीम ज्ञान, सीप र अनुभवका धरोहर
मंगलबार, १४ असोज, २०७६
-केपी शर्मा ओली
आज अक्टोबर १ अर्थात २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस । यस अवसरमा जीवनका उकाली–ओराली पार गर्दै, असीम ज्ञान, सीप र अनुभव संगाल्ने सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक नेपालीहरूप्रति हार्दिक वधाई तथा शुभकामना प्रकट गर्दछु । म तपाईंहरुको सु-स्वास्थ्य र खुसीयालीपूर्ण दीर्घजीवनको कामना गर्दछु ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९९१ देखि हरेक वर्ष अक्टुबर १ लाई इन्टरन्यासनल डे अफ ओल्डर पर्सन्स अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । आज द जर्नी टू एज इक्वालिटी अर्थात उमेरकै कारण गरिने विभेद-अन्त्यको यात्रा भन्ने नाराका साथ संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस भव्यतापूर्वक मनाइँदैछ ।
नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र ज्येष्ठ नागरिकको हक, हित संरक्षण एवं सम्बद्र्धनका लागि छाता संगठनका रूपमा कार्यरत राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ लगायत विभिन्न संघ–संस्थाहरुले यस दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै छन् ।
मानव जीवनमा ज्ञानका स्रोतहरु मध्ये सवैभन्दा उत्कृष्ट स्रोत अनुभव हो । यसको पाठ्य सामग्री र पाठशाला जीवन हो । पुस्तकबाट प्राप्त ज्ञान भन्दा कयौं गुणा उपयोगी यस्तो प्रायोगिक ज्ञानलाई हामी प्रज्ञा भन्छौं । ज्येष्ठ नागरिकहरुबाट प्राप्त हुने प्रज्ञा, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण एवं विकासका लागि परिचालन गर्नु पर्दछ भन्ने सरकारको मान्यता छ । यसका लागि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान र अनुभवमा आधारित सीपलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दैछ । ज्येष्ठ नागरिकहरुको मार्गदर्शनमा परिवार र समाजले सही दिशाको पहिचान अनि असल संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न सक्दछ ।
व्यक्तिको सरदर आयुमा भएको वृद्धिसँगै हाम्रो समाजमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या तीब्र गतिमा बढ्दैछ । अहिले हाम्रो देशमा करिव ३० लाख ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ । आफ्नो ऊर्जाशील समय कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्रका लागि समर्पित गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ।
नेपालका प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकको जीविका र रहन सहन मानवोचित स्तरमा सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुन मार्फत नै ठोस व्यवस्थाहरु गर्ने नीति लिएको छ । यसबीच वर्तमान सरकारले अघि सारेको हरेक अस्पतालमा जेरियार्टिक वार्ड अर्थात ज्येष्ठ नागरिक वार्ड संचालन गर्ने नीतिको कार्यान्वयन केही अस्पतालहरुबाट सुरु भइसकेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकारले मासिक एकसय रुपैयाँबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात गरेको थियो । जनवोलीमा वृद्ध भत्ता भन्ने गरिएको उक्त भत्ताको राशी २०७६ साउनदेखि ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । वर्तमान सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालभित्रै त्यसलाई पाँच हजार पुर्‍याउनेछ ।
२०७६ सालको प्रारम्भसँगै वर्तमान सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई योगदान रकम सरकारले नै वेहोर्ने गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने नीति कार्यन्वायन गर्न थालिसकेको यहाँहरुलाई विदितै छ । यतिखेर झण्डै अढाई लाख ज्येष्ठ नागरिक वार्षिक रुपमा एकलाख रुपैयाँ बराबरको तोकिएका सुविधा–सेवाहरु विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्राप्त गरिरहनु भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यस योजनामा आवद्ध गरिनेछ ।
सातवटै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम निर्माण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । स्रोत र साधन अपर्याप्त हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था मात्र गरेको छैन । यो सरकार यातायात सेवामा पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि सिट आरक्षण र भाडा छुट जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न समेत प्रयत्नशील छ ।
यस अवसरमा म, हाम्रो सामाजिक–साँस्कृतिक परम्पराअनुरुप परापूर्व कालदेखि कायम रहँदै आएको आफूभन्दा ठूलाको आदर र कदर गर्ने संस्कारलाई अक्षुण राख्न सबै नेपालीहरुप्रति विशेष आग्रह गर्दछु । साथै, हाम्रो समाजका अनुभव र सीपका धरोहर सम्पूर्ण आमाबुबा र दिदीदाजुहरुलाई एकपटक फेरि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु ।
(२९औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको सन्देश)
यी हुन् चीनको ऋणबाट समस्यामा परेका मुलुकहरु
‘विश्वस्तरमै नेपालको सुरक्षा राम्रो रहेको सन्देश’
कतारले तोक्यो कामदारको न्यूनतम तलब, आउँदो जनवरीदेखि लागु हुने
सुरक्षा व्यवस्था मजबुत, सोल्टी होटेल आसपास चिनियाँ जनमुक्ति सेना
किन र कसलाई दिए चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हड्डी धुलो पारिदिने धम्की ?
प्रहरी तालिम केन्द्रमै बलात्कृत भइन महिला प्रहरी प्रशिक्षार्थी
विराटनगर टाइटान्सको विजयी सुरुआत
लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
एनआरएनए चुनावः २३ सय ४० मत खस्यो, आचार्य र पन्त कसले मार्लान् बाजी ?
निदान अस्पतालमा मिर्गौला किनबेचकान्डः आरोपीविरुद्ध पाँच दिनको म्याद थप
दुई राष्ट्रपति ट्रम्प र इर्दोगानबीच पत्र युद्धः ‘मूर्ख नबन्न’ र ‘धेरै ठूलो नबन्न’ एकार्कालाई चेतावनी